Ukupheka Ungadliwa iwebhusayithi ye-Actualidad Blog. Iwebhusayithi yethu inikezelwe ku- umhlaba we-gastronomy, futhi kuyo siphakamisa imibono yezitsha zoqobo ngenkathi sikhuluma ngakho konke okuphathelene nokupheka nokudla.
El Ithimba lokuhlela lokupheka zokupheka Iqukethe i- ama-foodies anothando ngikujabulele ukuhlanganyela nawe ubuchwepheshe namakhono abo. Uma futhi ufuna ukuba yingxenye yawo, unganqikazi sibhale ngaleli fomu.
Ukupheka bekungokunye kokuzilibazisa kwami ​​kusukela ngisemncane futhi bengisebenza njengembongolo kamama. Yize kungahlangene nakancane nomsebenzi wami wamanje, ukupheka kuyaqhubeka ukunginikeza izikhathi ezinhle kakhulu. Ngiyakuthanda ukufunda amabhulogi okupheka kuzwelonke nakwamanye amazwe, ukugcina usesikhathini nezincwadi zakamuva nokwabelana nomndeni wami manje nawe, izivivinyo zami zokupheka.
Ngiyakuthanda ukupheka, kungenye yezinto engizithandayo, yingakho ngiqale ibhulogi yami, Ukupheka noMontse, lapho ngihlanganyela khona izindlela zokupheka zansuku zonke ngendlela elula nelula futhi ngiyijabulela.
Njengomthandi wokudla okumnandi, ngizibiza njengomlandeli wokupheka ngokujwayelekile. Ekukhetheni imikhiqizo nasekuhlanganiseni kwama-flavour, ngithola umzuzu wami wobuciko bansuku zonke. Lapha ngabelana ngezitsha engizithandayo nezindlela zokupheka, inhlanganisela yokudla kwendabuko kanye necuisine yaphesheya.
Bengikuthanda ukupheka kusukela ngiseyingane, njengamanje ngizinikele ekwenzeni izindlela zami zokupheka nokwenza ngcono konke engikufundile kule minyaka edlule, ngiyethemba uzithanda izindlela zami zokupheka njengoba ngithanda ukuhlanganyela zona nawe.
Ingqondo yami ehlala ivulekile futhi ebekelwe ukudala manje isiholele ezweni lamakhishi. Ngiyethemba uyazithanda izindlela zami zokupheka futhi uzisebenzise. Zimnandi!
Ikholwa lokupheka kancane nobhiya waseGuinness, kade ngilungiselela izindlela zokupheka zokukhotha iminwe. Ngokwesiko, kwesimanje, ngiyaqikelela ukwenza noma yini! Ukuzama nokuzama ukunambitheka okusha, ngiyethemba uzithanda izindlela zami zokupheka ngendlela engizenza ngayo.